प्रदर्शनअघि नै ‘कान्छी’काे लगानी सुरक्षित
scheduleशनिवार जेष्ठ १२ गते, २०७५
माघ २९ । यही फागुन ४ गतेलाई प्रर्दशनको मिती तोकिएको श्वेता खड्काले निर्माण गरेको ‘कान्छी’ले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेको छ । प्रदर्शनमा आउन अझै एक साता बाँकी रहँदा चलचित्र ‘कान्छी’ ले ब्राण्ड पार्टनर र डिजिटल राइट्स बेचेर नै लगानी उठाएको हो ।
प्रोडक्सन तथा पब्लिसिटी खर्च गरेर जम्मा २ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको कान्छीले हालसम्म २ करोड २ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको निर्माण टिमले जनाएको छ । फिल्मले ब्राण्ड पार्टनरहरूबाट ८० लाख रुपैयाँ लिएको छ भने डिजिटल र ओभरसिज राइट्सबाट १ करोड २२ लाख रुपैयाँ हातपारेको छ।
आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेको ‘कान्छी’ मार्फत नायिका तथा निर्मात्री श्वेता लामो समयपछि पुनः चलचित्रमा फर्किएकी हुन् । यस चलचित्रमा दयाहाङ राई, श्वेता खड्का, प्रज्वल सुजल गिरी, कामेश्वर चौरसिया, शान्त शर्मा, अनु शाह, भूमिका श्रेष्ठ, विशाल भण्डारी, नीर शाहलगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ।
निशान भट्टराईको नयाँ गीत ‘भुन्टी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
हलिउड अभिनेता मोर्गन फ्रीम्यानमाथि यौन उत्पीडनको आरोप
अरिजितले सलमानका लागि कहिल्यै गीत नगाउने
युट्युब ट्रेडिङको नं १ मा ‘बोल माया’
दिपिका र रणवीरको विवाह मिती तय
प्रभासको अपकमिङ फिल्म ‘साहो’मा ९० करोड बजेटको एक्सन सिक्वेन्स
विवाहलगत्तै नेहा धुपियाको बोल्ड तस्विर सार्वजनिक
युट्युब ट्रेन्डिङमा गीत हाबी : प्रकाश सपुतको ‘बोल माया’देखि अशोक दर्जीको गीतसम्म (भिडियोसहित)
बलिउड अभिनेता डा. अधिकारी रहेनन्
‘बेबी आई लभ यु’को गीत ‘सायद तेरो मेरो’को फिमेल भर्जन सार्वजनिक (भिडियोसहित)
पेरिसमा अर्जुनसँग देखिइन् परिणीति
प्रिया प्रकाशपछि यसरी भाइरल भईन् लिसा मिश्र
ह्यारी र मेघनको विवाहमा हिस्सा बनेकी प्रियंकाले यसरी पोखिन् इंस्टाग्राममा इमोसन
बेलायतको शाही विवाहमा पाहुनाका लागि अचम्मका नियमहरु
सुजैन खानको कारण अर्जुन रामपालको वैवाहिक जीवन धरापमा
प्रियंकाले जब यस्तो रहस्यको खुलासा गरिन्
साडे दुई करोड नक्कली नोटः निर्मातासहित ६ जनालाई थुनामा राख्न आदेश
अढाइ कराेड नक्कली नोट फिल्म निर्माताकाे
अक्षय कुमारको फिल्म ‘केसरी’को सेटमा आगलागी
चर्चित बलिउड कलाकारको अधुरो प्रेमयात्रा
अनिल कपुर न सन्जय दत्त यी क्रिकेटरसँग प्रेम गर्थिन् माधुरी दिक्षित
रोनाल्डो भन्छन्- सालाह मेस्सीजस्तै
एजेन्सी, ११ जेठ । पुर्व रियल मड्रिड स्टार खेलाडी रोनाल्डोले लिभरपुल स्टाइकर मोहमम्द सालाहको तारिफ गरेका छन् । उनले सालाहको...
विश्वकपको तयारी हुनुपुर्व नै ब्राजिललाई ठुलो झट्का, केही प्रमुख खेलाडीहरु घाइते
एजेन्सी, ११ जेठ । सन् १९५८ मा स्वीडेनलाई पराजित गर्दै ब्राजिलले पहिलो पटक विश्वकप उपाधि जितेको थियो । स्वीडेनमा नै आयोजित...
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा एमाले कार्यकर्ता पक्राउ
विराटनगर, ११ जेठ । मोरङको उर्लाबारीबाट सनम हत्या प्रकरण र साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा एमाले कार्यकर्ता रेवत...
मोरङ, ११ जेठ । गोरेलाई अदालतमा हाजिर गराइएपछि उनका बाबु नेत्र उप्रेती मोरङ आएका छन् । उनले आफूले छोरालाई पहिलेदेखि नै अवैध...
सरकारको १०० दिनः बाबुरामले दिए ‘पास मार्क’
काठमाडौं, ११ जेठ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ । सय दिनको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री...
अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा नेपालका घले, कति छ सम्पत्ति ?
काठमाडाैं, ११ जेठ । गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा परेका छन् । बिजनेस रिभ्यु...
आफ्नै श्रीमानले आठ महिनासम्म अपरण गरेपछि… (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ११ जेठ । सविना कार्कीले आफ्नो अपहरणमा सलंग्न अपराधीहरुलाई जेलमुक्त गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छिन् । बाँके...
काठमाडौं, १२ जेठ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा चलेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून रहेको बारे नयाँ पत्रिकाले...